Ogaden News Agency (ONA) – Warbixin Hordhac ah oo Ku saabsan Shirkii Kormeerka Madaxda JWXO iyo Jaaliyada Sweden oo Maanta Furmay
Warbixin Hordhac ah oo Ku saabsan Shirkii Kormeerka Madaxda JWXO iyo Jaaliyada Sweden oo Maanta Furmay
Waxaa maanta ooy taariikhdu tahay 18/1/2014, kafurmay caasimada wadanka Sweden ee Stockholm shirkii inta badan lasugayay kaasoo ay gudoonka oogu sareeya ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) kumarayeen qaarada Yururb. Kulankan oo ahaa mid siheer sare ah loosoo agaasimay ayay kasoo qaybgaleen shacab aad utiro badan oo buux dhaafiyay madashii kulankan lagu qabtay.
Wafti balaadhan oo uu hogaaminayay Gudoomiyaha JWXO Adm. Maxamad Cumar Cisman ayaa siwanaagsan loogu soo dhaweeyay madasha shirka. Shacabkii hoolka buux dhaafiyay oo aad uxamaasadaysan kuna faraxsan ineey maanta lakulmaan gudoomiyaha JWXO iyo waftidii kuwehelisay ayaa kasoo qaybgalay kulankan.
Waxaan idiin soo gudbin doonaa Haduu eebuhu yiraahdo warbixinta oo faah faahsan. Hadaba lasocda wararkaanaga danbe.